ओली नेतृत्वमा विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक बन्दैछ! – PathivaraOnline
Home > विचार > ओली नेतृत्वमा विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक बन्दैछ!
admin November 1, 2019 विचार	0
समृद्धि काम गरेर आउने हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको तथ्यहरुले पुष्टी गरेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक बनाउने र विश्वमा नेपाललाई चिनाउने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएकै कारण सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त भइरहेका हुन्। यसरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढदा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने निश्चित छ। तीन वटै सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने हो भने सकारात्मक परिणाम ल्याउन सहज हुनेछ। – अनुप पौडेल, जनपत्र ।
इन्द्रेणीमा देउडाकि कोइली झुप्री, एउटा लुकेको आवाज संसारभर गुन्जियो – भिडियो सहित